Uluntu nezopolitiko | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: uluntu kunye nezopolitiko
Ubume obuhlukile kwendawo yeSamara
Ummandla weSamara wahlukile kubutyebi bendalo: ngaphezulu kwe-300 indawo yesikhumbuzo kwindawo yayo enkulu. Kulapha apho kugcinwa khona iintlobo ezinqabileyo zezityalo nezilwanyana. Imigodi yenziwa kulo mmandla ...
Incwadi yokulahla yendodakazi evela kumama. Incwadi yentombi evela kumama nobaba njengaleyo
Kukho zonke iintlobo zeemeko ebomini, kwaye kuhlala kusenzeka ukuba umama nentombi yakhe bangathethi ngokulula, ngentliziyo ukuya entliziyweni, betyhila iimfihlo zabo kunye nokukhathazeka omnye komnye. Kule meko, unga ...
Rostov-on-Don: isixeko sabantu. Ubungakanani bemihlali kunye nokwakhiwa kweRostov-on-Don
Abemi baseRostov-on-Don namhlanje bangaphezulu kwesigidi se-1 samawaka. Ngokuzithemba ihlala kwindawo yeshumi kuluhlu lweedolophu zaseRussia ngokwenani labemi. Umhlali wesigidi wazalwa ngo-100, ...
Imbali kunye nenkcazo ye-volcano Eyyafyatlayokudl
Ukususela kumaxesha amandulo, iintaba-mlilo bezisoyikisa kwaye zitsala abantu. Banokulala kangangeenkulungwane. Umzekelo yimbali yakutshanje ye-volcano ye-Eyjafjallajokull. Abantu balima amasimi kumathambeka eentaba zomlilo, boyisa iincopho zabo, ...
7 Februwari. Iholide kunye neziganeko zembali namhlanje
Ngokwekhalenda kaGregory, umhla we-7 kuFebruwari uthathwa njengosuku lwama-38 enyakeni. Kuyo yonke imbali, zininzi iziganeko ezingalibalekiyo ngalo mhla. Yile nto eli nqaku liza kuyinikela kuyo. Usuku lwemidlalo yasebusika ...
Abafazi abacebileyo baseRashiya: ukulinganisa
Inqanaba elithi "Abasetyhini abacebileyo eRashiya" lipapashwe ngumagazini iForbes iminyaka eliqela ilandelelana. Kulo nyaka ibandakanye abathathi-nxaxheba abangama-30 abanethamsanqa ukusuka kwi-60 yezigidi zeedola ukuya kwi-1 yezigidigidi ...
Imikhosi yeTe eChina. Ubugcisa bemidlalo yeeyi
Iti inendawo ekhethekileyo kubomi babantu baseTshayina, kwaye ukusela iti kuye kwaba bubugcisa obahlukileyo kumsitho weti. AmaTshayina akhetha iti kwezinye iziselo nasehlotyeni: it ...
IMizekeliso ngeenja. IMizekeliso namazwi kubantwana
Imizekeliso nezaci ziyinxalenye yenkcubeko yalo naluphi na uhlanga. Eminye yamaqhalo nezaci abantu abazisebenzisayo ngaphandle kwamathandabuzo. Ke ngokulungeleleneyo bayongena kwintetho enesandi. Inani elikhulu lezi ziyaziwa ...
Izikhumbuzo zezobugcisa zaseMoscow: zanamhlanje nezembali
Isixeko saseMoscow siyamangalisa kungekuphela ngenxa yokuba siyinkunzi yelizwe lethu. Igcine izikhumbuzo ezininzi zelifa lemveli lenkcubeko. Sele kwinkulungwane ye-15, uyilo lwaseMoscow lwaba yimbonakalo yenkcubeko kwilizwe liphela. Uyilo ...
I-Baobab eyimfihlakalo: umthi wamangalisa
Umthi webaobab ongaqhelekanga wahlukile kuyo yonke into: ngobukhulu, ngokulingana, ngokwexesha lokuphila. Nokuba isantya sokusinda kwayo siya kuba ngumona waso nasiphi na isityalo. I-baobab ngumthi omangalisayo. Ungoyena mmeli ubalaseleyo wosapho lakwaMalvov, ...
Ngubani odibeneyo kwaye ubani unikwe igama lesidlo esinomdla?
Ngenye imini olunye usapho olukrelekrele lwandwendwela, lufundwe nje kwaye lufundile. Ngexesha lokudibana, njengesiqhelo, baqala ukuthetha ngemixholo yezihloko, ngakumbi malunga nabaphambukeli ngokungekho mthethweni, ...
Sifunda indlela ama-squirrels ebusika
Ubomi boonomatse kwindalo yenzeka, njengomthetho, emahlathini. Isiseko sesondlo sesilwanyana yimbewu yomthi. Kungenxa yoko le nto unomatse ehlala emahlathini axubeneyo, apho anokufumana ngokulula khona ...
Ukushisa eSyprus iinyanga
Indawo eyintandokazi yeMeditera- isiqithi saseCyprus- idume ngamanxweme ayo amahle, imozulu enelanga kunye nemozulu eshushu eyomileyo. Ehlotyeni, umoya ufudumala kakhulu kangangokuba iqondo lobushushu eSipro ligqitha ngaphezulu kwe-35 ° C uphawu. Apha ...
Inyama ibhabha: inkcazo, izibungu, ixesha lokuphila
Iimpukane zezomyalelo weDiptera, ekukho kuwo iintlobo ezingaphezu kwekhulu elinamashumi amahlanu amawaka emhlabeni. Kwaye bambalwa kuphela kubo abathwali bosulelo, ngelixa uninzi lungenabungozi ngokwaneleyo, njengamabhabhathane. Ke ngoku ...
Indlela yokubopha amabele akho - iindlela kunye neengcebiso
Ukuncancisa amabele yenye yeendlela zokumisa ukuncancisa okusetyenziswa ngabafazi abafuna ukuhambisa usana lwabo ekutyiseni okungelolakho. Kodwa le ndlela ayikhuselekanga. Ukuba awuyazi indlela yokubopha amabele akho kwaye yintoni ...
Amakhanda "Chic": umgangatho wobungakanani, ukuthembeka kunye nodumo
Yonke indoda iphupha ngokucheba okucocekileyo nokucocekileyo ngaphandle kokutsha, ukusika kunye nokucaphuka. Ukucheba kakuhle bubugcisa obufuna ukuphuculwa. Indima ephambili kuyo yeyesixhobo. Namhlanje…
Izixhobo ezihlaziyiweyo kunye nezingavuselelekiyo- ukusetyenziswa okuzinzileyo. ISebe leMithombo yeNdalo
Imithombo yendalo ibaluleke kakhulu eluntwini. Zisebenza njengomthombo ophambili wemveliso yezinto eziphathekayo. Amanye amashishini, ikakhulu ezolimo, axhomekeke ngqo kwizibonelelo zendalo. Ngokukodwa ...
Izixhobo zempi kwimyuziyam yaseMoscow naseMoscow (isithombe)
EMoscow, wonke umntu unokufumana inani elinomtsalane kubo. Izixhobo zomkhosi kwiimyuziyam eMoscow zinomdla omkhulu kubakhenkethi. Imiboniso ukusukela ngexesha leMfazwe ePhambili yePatriotic ukuza kuthi ga ngoku ...
Yintoni ekutya ukutya kwendalo. Ukuzala nokuzala
Intsapho ye-carp inentlanzi yesilp emangalisayo. Ngenxa yendlela yakhe yokuphila yesikolo kunye nobunzima obuphezulu, uye wathandwa ngabalobi abaninzi. Kungenxa yoko le nto befunda ngokusondeleyo imikhwa kunye nomfanekiso wakhe ...
Khu phisana. Imizekelo yokukhuphisana okugqibeleleyo
Ukuphucula imveliso, ukunciphisa iindleko zokuvelisa, ukuzenzekelayo zonke iinkqubo, ukwandisa ukwakhiwa kwamashishini - konke oku kuyimeko ebalulekileyo kuphuhliso lweshishini lwanamhlanje. Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokufumana amashishini ukuba enze konke oku? ...
Page 1 Page 2 ... Page 309 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,222.